August 2007 ~ မာန်လှိုင်းငယ်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့သာမဂ္ဂီအဖွဲ့ချုပ် ထုတ်ပြန်/တိုက်တွန်းနိုးဆော်ချက်
11:18 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
စာတွေမြင်ချင်ရင် ဓါတ်ပုံကို နှိမ့်လိုက်ပါ။ စာအားလုံးကို မြင်မြင်ထင်ထင် ဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
4:14 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
`ဆန္ဒပြတာဟာ သိပ်ဆင်းရဲနေလို့ကွ။ အရင်တုန်းကလေ လူတစ်ယောက် တစ်နေ့ကို ထမင်း ၂ ထပ် စားနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ ဟင်းနဲ့နော် အခု ဟင်းနဲ့ မစားနိုင်ဘူး၊ ပြီးတော့ ၂ ထပ် မစားနိုင်ဘူး။ တစ်ထပ်တည်း စားနေရတယ်။ ဟင်းနဲ့ မစားဘဲနဲ့ ဘာနဲ့စားနေလဲဆိုတော့ ဆီနဲ့၊ ဆားနဲ့၊ ထမင်းနဲ့၊ အဲဒီ လို စားနေရတာ၊ သိပ်ဆင်းရဲနေကြတယ်။ အခုဟာက လုံးလုံး မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာပဲ။ ငတ်ပြတ်နေ တာနော်။
ငတ်နေလို့ ကျနော်တို့ ငတ်နေပါတယ်။ ကျမတို့ ငတ်နေပါတယ်ဆိုတာကို ရိုက်နှက်နေလို့တော့ တော်သလား၊ မတော်သလားဆိုတာ စဉ်းစားကြပေါ့။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် လုံးလုံးမရှိရင်တော့လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။´
12:16 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
တခါ --- တခါ
တခါ -- တခါ
လောကဓံလမ်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းမှာ ---
လျှောက်လျက်သာ --- ၊
ရှိတတ်ဆဲ --- ။
အံကိုတင်းခံ အမြင့်ပျံ --- ။
ပျံသန်းနေမြဲ ပျံသန်းဆဲ --- ။ ။
(16. 02. 2007)
12:14 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ဘ၀အမောတွေ --- အကြောင်း
ငါ ထိုင် စဉ်းစား နေတော့
အတွေးကမ္ဘာထဲ ရောက်နေသူကို ငေးမော --- ။
ကြိတ်မှိတ်ကာ တင်းခံ --- သလို
ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်း ရင်ဆိုင် --- ။
အမှောင် တရိပ်ရိပ် ဖြန့်ကျက်ရင်း
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကို လွှမ်းမိုးသွားစေပြီ --- ။
ငါ့ ဘ၀ဟာ ---
လှေကလေး --- သမျှ
ဝေး --- ဝေး ပျောက် ကွယ် သွားစေပြီလား --- ။
နိုင်ပွဲ တလွင့်လွင့် ရှိခဲ့လေတော့
ငါ့ ခရီးရှည်လည်း အဆုံးသတ်လို့ မရသေး --- ။
အတွေ့အကြုံ ပြန်လည် ဖမ်းစားရင်း
ထပ်ခါ --- ထပ်ခါ
ညနေ ဆည်းဆာ ဖြစ်လာတိုင်း
မျှော်လင့်ခြင်းတွေ တဖွဲဖွဲနဲ့ ---
ငါ ခရီးကို အထပ်ထပ် လျှောက် နေ ဆဲ --- ။ ။
2007 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (18)ရက်။
12:11 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ပေါင်းစည်းရေး၊ ညီညွတ်ရေးဟာ အခရာ။
မနက်ဖြန် ခရီး လျှောက် လှမ်းဖို့။ ။
2007 ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (16)ရက်။
12:10 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မီးကုန် ရမ်းကုန် ကျူးလွန်မှုတွေ
မ -- မ ဟုတ် ပါဘူး ---
မ -- မ လုပ် ပါဘူး ---
ထစ် ထစ် ငေါ့ ငေါ့
ထောင်ပေါင်းမက ဘူး ----
မ၀င်မဆန့် ပိတ်ဆို့ ထိုးနှက်။
အလောင်းဘုရား စစ်ဗျူဟာ ---
မီးသတ် --- အဖွဲ့များကို
လိုရာ ပုံသွင်း ထွင်းကာနေ။
မောဟတွေ ပေါင်းစည်းရာ ဘုံမှာ
11:59 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ငါ့ကိုယ်ငါ အသုံးချ ---
ဘယ်သူ ရောက်သလဲ ---
ဘယ်သူ --- လျှောက် --- လျှောက်
ဘယ်သူ --- ရောက် --- ရောက်
ဒေါသူပုန် ထမဲ့ ည။
တဏှာ၊ ငွေ၊ အာဏာတို့မှာ
ကြွေမွသားတဲ့ မှန်ကွဲတွေရဲ့ ည
ကြွေသွားတဲ့ မှန်ကွဲတွေရဲ့ ည။ ။
မတ်လ တော်လှန်ရေးတဲ့ ---
ကြက်သီး တဖျင်းဖျင်း ထ
ကိုယ်တိုင် မကြုံဖူး တော့
အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်အဖြစ်ကို မရောက်စေချင်။
အရောင်စုံ အသွေးစုံ အလွှာစုံနဲ့
ရှုမ၀ ကြည့်မ၀ တပေါင်းနွေအလှ
မတ်လ (13) မှာ။
အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်အဖြစ်ကို မရောက်စေချင်။ ။
2007 ခုနှစ်၊ မတ်လ (7)ရက်။
ကျနော် မတ်လ (13)ရက်နေ့အတွက် ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာပါ။ အခု ကျနော် ဒီမှာ ပြန်တင်ထားတာပါ။
11:30 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကျနော် စာအသစ်၊ ကဗျာအသစ်တွေကိုတော့ မရေးနိုင်သေးပါဘူး။ ရှိတာလေးတွေ အရင်တင်ထား တာပါ။ ကျနော် အသစ်အသစ်တွေ ရေးနိုင်အောာင် ကြိုးစားသွားမှာပါ။
နောက်ပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကျနော် တင်ပေးမှာပါ။ မိတ်ဆွေများအားလုံး နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ပေးမယ့် အသစ်တွေ များများ update ဖြစ်အောင် ကြိုးစားယူနေတုန်းပါပဲဗျာ။
4:39 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ဒီဗွီဘီ ၂၆ သြဂုတ် ၂၀၀၇
လောင်စာဆီဈေး တက်လိုက်လို့ အကြပ်အတည်းကြုံနေရတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေအပေါ် ဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများက ဒီနေ့ နံနက် ချီတက်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်။
အန်စီဂျီယူဘီ၊ ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့ စတဲ့အဖွဲ့တွေက ဦးဆောင်တဲ့ ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ ချီတက်ဆန္ဒပြသူများက
`ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ လွတ်မြောက်ရေး တို့အရေး´
`စစ်အာဏာရှင်အစိုးရ အလိုမရှိ´ လို့ကြွေးကြော်ပြီး စစ်အစိုးရရဲ့ သံရုံးရှေ့မှာ နာရီဝက်ကျော် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
လောင်စာဆီဈေးတက်တာကို မကျေနပ်တဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများကို စစ်အစိုးရက နှိမ်နင်းအရေးယူတာကြောင့် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဦးဆောင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့က ဦးကျော်သောင်းက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများသာမက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကို အားပေးထောက်ခံတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားအချို့ကလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
နအဖစစ်အစိုးရက ယခုက ၁၅ ရက်မှာ ဓာတ်ဆီတဂါလန် ယခင်ကျပ် ၁၅၀၀ ကနေ ၂၅၀၀၊ ဒီဇယ်တဂါလန် ၁၅၀၀ ကျပ်ကနေ ၃၀၀၀၊ စီအန်ဂျီ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တယူနစ်ကို ယခင် ၅၇ ကျပ်ကနေ ၂၇၀ ကျော်ထိ ကြိုတင်မကြေညာဘဲ ရုတ်တရက် ဈေးတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုဈေးမြှင့်လိုက်တာကြောင့် ရန်ကုန်မှာ ဘတ်စ်ကားတွေ ရုတ်တရက် လျော့နည်းပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးနောက် ယာဉ်စီခတွေလည်း နှစ်ဆမြင့်တက်သွားရတယ်။
4:23 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ထိုင်ကာ စဉ်းစားနေတဲ့ ကိုဖုန်းမော်
မတ်လ အစောပိုင်းရက်များနဲ့အတူ ---
ဒီကာလ၊ ဒီအနေအထားမျိုးမှာပေါ့ --- ။
(ကိုဖုန်းမော်ကို အောက်မေ့တမ်းတခြင်း၊ သတိရခြင်းတွေနဲ့ ကဗျာအဖြစ်ဖွဲ့ဆိုလိုက်တာပါ။ ရေးဖွဲ့ထား တာကတော့ မတ်လ 13 ရက်နေ့တုန်းကပါ။ အဲဒီနေ့မှာ အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်လို့ ဒီကဗျာလေးနဲ့ ကိုဖုန်းမော်ကို သတိရမှုများစွာနဲ့ ရေးလိုက်ခြင်းပါ။)
2007 ခုနှစ်၊ မတ်လ (13)
4:17 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
တိမ်တောင် မငိုတော့ --- သလို
မြေ --- မစိုဘူးပေါ့။
11:36 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မခင်ဥမ္မာနဲ့ မမိဆူးပွင့်တို့ကို မနေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ 1988 ခုနှစ် အခြေအနေတချို့ နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာအက်ဖ်အေမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။
2007 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (23)ရက်။
အာအက်ဖ်အေ။ ။ သောတရှင်များရှင်။ သြဂုတ်လ (22)ရက်၊ မနေ့က လူထောင်နဲ့ချီအင်အားရှိ တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီသြဂုတ်လ (22)ရက်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲမဖြစ်ပေါ်အောင် ဟန့်တားတဲ့အနေနဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ကို သြဂုတ်လ (21)ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ဝန်းကျင်မှာ ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလို့ ခန့်မှန်းပြောဆို နေတာတွေလည်း ရှိပါရှင်။ ဒီလိုကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပေမယ့် သြဂုတ်လ (22)ရက်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲကိုတော့ လူထောင်နဲ့ချီ ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ မရှိတော့တဲ့ အချိန် ဒီဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်လာတဲ့သူတွေကတော့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါ တယ်ရှင်။ မသင်းသင်းခေါ် မမီးမီးဆိုရင် လမ်းမပေါ်မှာ ချီတက်နေရင်း လှမ်းတလျှောက် ပြည်သူတွေ ဟောပြောစည်းရုံးသွားတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်း ခေါင်းဆောင်ပြီး ဘုရားပေါ်တက် ၀တ်ပြုခဲ့တဲ့ ဒေါ်နော်အုန်းလှက ဦးဆောင်ချီတက်ခဲ့တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အိပ်အိုင်ဗွီ ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် စေတနာ့ဝန် ထမ်း ကူညီနေတဲ့ မဖြူဖြူသင်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူ ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဆိုကို အမျိုးသမီးတွေ သက်သေထူနေ ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 1988 ခုနှစ်၊ လူထုအုံကြွမှုတုန်းက အမျိုးသမီးတွေ ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးကနေ ပါဝင်ခဲ့ပုံကို ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့၊ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ 88 ကျောင်းသူဟောင်း မခင်ဥမ္မာနဲ့ မမိဆူးပွင့်တို့ကို မနေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ 1988 ခုနှစ်၊ အခြေအနေတချို့ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပေးဖို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။
အာအက်ဖ်အေ။ ။ သြဂုတ်လ (22)ရက်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲက ဒီရုပ်ပုံတွေ၊ အသံတွေ ကြားလိုက်ရတဲ့ အထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရဲရဲတောက်ပြောဆိုသံတွေကို တော်တော်များများ ကြားလိုက်ရတော့ ဒီအခြေအနေက 1988 ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုမတိုင်ခင် ဒါမှမဟုတ် အဲဒီကာလပတ်ဝန်းကျင်က ပြန်ပြောင်းသတိရစေမလား။ အမှတ်ရစေမလားရှင့်။
မခင်ဥမ္မာ။ ။ အထူးသဖြင့်တော့ ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေ 1988 အရေးအခင်းမှာ စပြီးတော့ မှ ကျမတို့ မတ်လ တံတားနီအရေးအခင်း၊ စပြီးတော့မှ ဇွန်လအရေးအခင်း စသည်ဖြင့် တောက်လျှောက်လုပ်လာခဲ့တဲ့ အထဲမှာလည်း အမျိုးသမီးကျောင်းသူတွေက ရဲရဲတောက် တက်ညီ လက်ညီနဲ့ အကုန်လုံး စုစုစည်းစည်းနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျမတို့ မနေ့က ဆန္ဒပြမှု၊ လှုပ်ရှားမှုဟာ ကျမတို့ 88 ခုနှစ် အမျိုးသမီးတွေလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့မှ သတိရစရာတွေ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
အာအက်ဖ်အေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ မဆူးပွင့်အနေနဲ့ရော။ မနေ့က ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသုံးသပ်မိသေးလဲရှင့်။
မမိဆူးပွင့်။ ။ မနေ့ကဖြစ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဆိုရင် 88 မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေ တော်တော်များများ အထိန်းအသိမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအမျိုးသမီးတွေက ဦးဆောင်ပြီးတော့ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှုတခုကို စည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျမတို့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အတွက် တကယ့်သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တခုလည်းဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ သုံးသပ်မိတာက ကျမတို့နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့အချိန်ထဲမှာ စွန့်လွှတ်မှု၊ စွန့်စားမှု အပြည့်နဲ့ ပေးဆက်ခဲ့ကြတာချည်းပါပဲ။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ဒီ 8 လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလတုန်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဒီအိမ်ရှင်မများသမဂ္ဂတို့၊ သူနာပြုများသမဂ္ဂတို့၊ ကျောင်းဆရာမများသမဂ္ဂတို့ဆိုတာ လည်း ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ အချိန်မီ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာလည်း ကျမတို့ မျှော်လင့်ထား ပြီးသားပဲ။
အာအက်ဖ်အေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့က အခုလို ဦးဆောင်ကျတဲ့အတွက် အရင်တုန်းက အတွေ့အကြုံတွေကို လေ့လာကြည့်ရင်တော့ စစ်အစိုးရက ဖိနှိပ်တာတွေကို ခံရတယ် သိပေမယ့်လည်း ဒါတွေကို မကြောက်မရွံ့ ဆောင်ရွက်တဲ့သဘောလည်း တွေ့ပါတယ်။ အဲဒီအနစ်နာခံ ရတဲ့နေရာမှာလည်း အတွန့်မဆုတ်ရှိတတ်တဲ့ သဘောတွေအပေါ်မှာရော နည်းနည်းသုံးသပ်ပေးပါဦး ရှင့်။
မမိဆူးပွင့်။ ။ ခုချိန်မှာတော့ ယူနီဖောင်းမ၀တ်တဲ့ အရပ်သားအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် လုပ်ပြီးတော့ နှိမ်နှင်းဖို့ စနစ်တကျပြင်ဆင်နေတာက ထင်ထင်ရှားရှားပါပဲ။ ဆိုတော့ ဒါ လူထုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အင်မတန် အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အဟန့်အတားတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ကလည်း ဒါကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကို နအဖ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီလိုလုပ်ကွက်တွေ၊ ထွင်လုံးတွေ လုပ်နေတာကို အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်သွားဖို့ ချဉ်းကပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီကြံ့ဖွတ်တို့၊ စွမ်းအားရှင်တို့တွေကို ကျမတို့အနေနဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာ မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ဒီကနေ့ပေါ့နော်၊ အဆင်မပြေမှုပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြည်သူလူထုထဲမှာ မိမိတွေလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ စနစ်တခုကို အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ နေရာမှာ ဒီနေ့အတွက် ထွင်လုံးတရပ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ အသုံးချခံနေရတဲ့ သမိုင်းတရားခံတွေ မဖြစ် သင့်ပါဘူး။ အမှန်တရားဘက်ကို ခုန်ကူးလိုက်ဖို့ဆိုတာက ဒီခြေလှမ်းလေးတလှမ်း လှမ်းလိုက်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဒါဟာ ကျမတို့ ရှင်သန်မှုအားလုံးအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ရပ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို ကျမပြောချင်ပါတယ်။
အာအက်ဖ်အေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီမမိဆူးပွင့်ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေအပေါ်မှာ မခင်ဥမ္မာအနေနဲ့ ဖြည့်စွတ်ပြောချင်တာများရှိသေးလားရှင့်။
မခင်ဥမ္မာ။ ။ ကျမ မဆူးပွင့်ပြောတဲ့အပေါ်မှာ အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။ လောလော ဆယ်တော့ ကျမမြင်နေတာက ဒီ ခုနက စွမ်းအားရှင်၊ ပြီးသွားလို့ရှိရင် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းထဲမှာ ပါနေကြတဲ့သူတွေ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေက ကျမတို့ သိနေပါတယ်။ သူတို့စိတ်နဲ့ သူတို့ဆန္ဒရှိလို့ ပါဝင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ အတင်းအဓမ္မ ပါဝင် ခိုင်းတာတွေ။ မသိပဲနဲ့ သူတို့ အတင်းအဓမ္မ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခိုင်းတာတွေ ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုတွေ၊ ဖိအား ပေးမှုတွေနဲ့ ပါဝင်နေကြရတာပါ။ ဒီအမျိုးသမီးတွေက ခုနက မဆူးပွင့် ပြောသလိုပဲ၊ ကျမတို့ 88 ခုနှစ်မှာတုန်းကဆိုလို့ရှိရင် 88 အရေးတော်ပုံမှာ ဒီကျောင်းဆရာမများသမဂ္ဂဆိုတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာအခုရှိနေတဲ့ စွမ်းအားရှင်၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက စိတ်ရှိလို့၊ စိတ်ဝင်စားလို့၊ သဘောတူလို့ ပါဝင်ကြရာတာမဟုတ်တဲ့အနေအထားမှာ အခုလို ကျမတို့ မနေ့က (22)ရက်နေ့မှာ အမျိုးသမီးတွေကနေပြီးတော့မှ၊ ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာ တွေ အပေါ်မှာ၊ ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေ၊ တိုင်းပြည်မှာ ဖြေရှင်းဖို့လိုတဲ့ပြဿနာတွေ သူတို့ဘ၀ရဲ့ အခြေအနေတွေကို သူတို့ကိုယ်၌က ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ ဖော်ထုတ်ပြတဲ့ဥစ္စာ၊ ပြည်သူ့ရှေ့ကနေ မားမားရပ်ပြတဲ့ဥစ္စာက ကျန်တဲ့အမျိုးသမီးထုတွေက ဆက်ပြီးတော့မှ ကျမတို့ 88 ခုနှစ်တုန်းက စွမ်းစွမ်းတမံ အတူကိုလက်တွဲပြီးတော့မှ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ပါဝင်ခဲ့ကြသလို၊ အခုချိန်မှာလည်း ပါလာကြတော့မယ်ဆိုတာမျိုး ကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့မှ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို ပြန်ပြီးတော့မှ သုံးသပ်လို့ရပါ တယ်။
အာအက်ဖ်အေ။ ။ ဒီအခု လက်တလောမှာ 88 မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသမီးကျောင်းသူတွေကော၊ နောက်ပြီးတော့ အိမ်ရှင်မ အမျိုးသမီးတွေ၊ အခုလှုပ်ရှားနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ဒီမနေ့က ဆန္ဒပြပွဲမှာဆိုရင် တော်တော်လေး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ဦးဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရတော့ ဒီအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ ပြည်ပမှာရောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ မခင်ဥမ္မာနဲ့ မမိဆူးပွင့်က ဘာတွေများ ပြောကြားချင်တာရှိသေးလဲရှင့်။
မမိဆူးပွင့်။ ။ ကျမအနေနဲ့ ပြောချင်တာက ဒီနေ့ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ကျမတို့လူထုက ကိုယ်ကျရာတာဝန်ကနေပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘ၀ကို ရိုက်ခက်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ် နိုင်အောင် ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ ဒီအရိုးစင်းဆုံးကိစ္စအခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ စတင်ပြီး တော့ တောင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုယ့်အခွင့်အရေး၊ ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားတွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆို နေတာလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီလို အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ အစိုးရ၊ စစ်အစိုးရရဲ့ လက်အောက်မှာ ဒီလို လှုပ်ရှားမှုတွေ ထလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာက အင်မတန်မှပဲ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါ တယ်။ အင်မတန်မှလည်း သတ္တိပြောင်မြောက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ ဒီလှုပ်ရှား မှုတွေအပေါ်မှာ ရင်ခုန်သံတွေတထပ်ထဲ လေးစားဝင်ကြည့်နေတယ်။ အားပေးနေတယ်။ ကျမတို့ သူတို့ တွေရဲ့ နောက်မှာ အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျမတို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မခင်ဥမ္မာ။ ။ ဒီသမိုင်းတလျှောက်မှာ အမျိုးသမီးတွေက ကျမတို့နိုင်ငံမှာ ပြန်ကြည့်ရင့် အမြဲတမ်း ကျမတို့ ပြည်သူနဲ့တသားထဲ၊ ပြည်သူနဲ့အတူ ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ မတရားမှုမှန်သမျှကို၊ ဖိနှိပ်မှုအာဏာရှင်မှန်သမျှကို ကိုလိုနီစနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်စဉ်ကတည်းက ကျမတို့ ရပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီသမိုင်းကို ဆက်ပြီးတော့မှ သယ်ဆောင်နေကြတယ်။ ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးထု ညီအစ်မတွေအား လုံး၊ အဒေါ်တွေအားလုံးကို ကျမတို့ ပြည်ပရောက် အမျိုးသမီးတွေ၊ တိုင်းပြည်တွေမှာ ရှိနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအားလုံးက တခဲနက်ထောက်ခံပြီးတော့မှ အားပေးနေမယ်။ အတူတူရှိနေမယ်ဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်။
အာအက်ဖ်အေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ မမိဆူးပွင့်နဲ့ မခင်ဥမ္မာကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။
12:19 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
စာကို မြင်ချင်ရင် ဓါတ်ပုံကို နှိပ်လိုက်ပါ။ စာကိုဖတ်နိုင်မှာပါ။
ကမ္ဘကြီးရဲ့ တနေရာမှာ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုရှိနေမလဲဆိုတာ ဒီကဗျာလေးနဲ့ ခံစားတိုက်ဆိုက်တဲ့ လူတွေအတါက်ဆိုရင် နှစ်သက်မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ငယ်ဆူးအိမ်ကို ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေများ စာရေးချင်တယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်လို့ရအောင် ကျနော် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ehmoonnge@gmail.com ကို လိပ်မူပြီး ဆက်သွယ်ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
11:55 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မိတ်ဆွေများကို ကျနော် အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက် ကဗျာတွေကိုလည်း တင်ပေးသွားပါမယ်။ ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံး ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ခံစားမိတာလေးတွေရှိတာနဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်က ကျနော့်ဆီကို ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို ကြိုက်တာကြောင့် အခုလို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျနော့်ဆီပို့ပေးတဲ့ ကဗျာဆရာ ငယ်ဆူးအိမ်ကို ကျနော် ကျေးဇူးပင်ပါတယ်ဗျာ။
1:53 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
2007 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (19)ရက်။ ညပိုင်း
ဘီဘီစီ။ ။ အခုလို 88 မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ လမ်းပေါ်ထွက်လာကြတော့ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်း ချက်က ဘယ်အထိ ဆက်သွားမှာပါလဲ။ ကျနော် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ ---
ကိုမင်းကိုနိုင်။ ။ ကျနော်တို့က ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ ဘယ်အခြေအနေကို ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ ကို လက်တွေ့ထင်ဟပြလိုက်တာပဲ။ ပြည်သူတွေဟာ နောက်ဆိုလို့ရှိရင် ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ အဲဒီ မော်တော်ယာဉ်စီးဖို့နဲ့ မလုံလောက်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဟောဒီလို လမ်းမတွေပေါ်ရောက်လာလိမ့် မယ်ဆိုတာကို အမြည်းသဘောနဲ့ ကျနော်တို့ ပေးလိုက်တာပဲ၊ ဒါနမူနာပဲရှိပါသေးတယ်။
ဘီဘီစီ။ ။ ဆိုတော့ ကိုမင်းကိုနိုင်ဆိုလိုတာက ခုနက ဒီလောင်စာဆီဈေးတွေ ပြန်ကျတဲ့အထိ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြသွားမှာလားခင်ဗျ။
ကိုမင်းကိုနိုင်။ ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အခက်အခဲကို တကယ်ဖြေရှင်းချင်တဲ့ ဆန္ဒ သူတို့မှာ ရှိသလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာကို ပြည်သူတွေ သိသွားဖို့က လိုရင်းဖြစ်တယ်ဗျ။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းက၊ သူတို့ တကယ်ဖြေရှင်းချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့ဘက်က တရားဝင် ဟောဒီ အခက်အခဲကိုတော့ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းပါ့မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြန်ချက်မျိုးကို ကျနော်တို့ စောင့်နေမယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ပဲနဲ့ ပြည်သူတွေ မအောက်နိုင်လို့၊ ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်း အဲဒီ ပြည်သူတွေနဲ့ ဖြေရှင်းကြပေ တော့။
ဘီဘီစီ။ ။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစဉ်က ထုတ်လွှင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်အင်တာဗျူးကို ကျနော် အသံကို ပြန်ဖြည်ပေးထားပါတယ်။
(၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့်အတူ ပြည်သူလူထုများ လမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခြင်း။
11:24 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
စစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းများကို ပြင်ဆင်ပေးရန်အတွက် (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဆက်လက်တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ပြောကြားသည်။ (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့်အတူ ပြည်သူလူထုများ လမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခြင်း။ါ
10:47 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် အားလုံးဖတ်လို့ရအောင် တင်ထားပေးပါတယ်။ ကျနော် မူရင်းနဲ့ပဲ တင်ထားပေးပါတယ်။
5:30 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
လင်းလက် လာ။ ။
3:58 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ငြိမ်းချမ်းစွာ၊ လွတ်လပ်စွာ၊ သွားလာနေထိုင်နေတဲ့ လူတွေကို
သူပုန်သူကန်ဆိုတာ “အာခံရဲသူ” တွေဖြစ်တယ်။
ကျနော် ကဗျာစရေးသား၊ ရေးဖွဲ့၊ ဟိုခြစ်၊ ဒီခြစ်၊ လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက ဒီကဗျာကို ရေးဖွဲ့ထားတာပါ။ တော်တော်တော့ ကြာနေပါပြီး။
3:37 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
The Foolish Succumb To Passion & Love ,
So, And are Often in Grief . !
The Clever Try To Be Free From Love ,
But Struggle With Self-Love . !
ဒီကဗျာကို ကျနော် နှစ်သက်လို့ပါ။ ဒါလေးကိုလည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာရေးဆရာနာမည်ကို တော့ မေ့နေလို့ မသိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော် ဒီအတိုင်းပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
5:09 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
အလွမ်းအဆွေးတွေထဲက လွတ်မြောက်လမ်းကိုလည်း မမြင်တော့ဘူးပေါ့။
မင်းကိုမချစ်တော့ဘူးလို့ စာတကြောင်းတည်းနဲ့ အဆုံးသတ်
sorry အထပ်ထပ်သုံးခဲ့တဲ့ ချစ်သူရယ်
အတိတ်ကာလက အရမ်းအရမ်းကို ချစ်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တာမင်းဘဲမဟုတ်လား။
အဲဒီစကားလုံးတွေကို ၃ ရက်ဆိုတဲ့ အချိန်ကဆုံးဖြတ်
မင်းက ဒီဇာတ်လမ်းကို အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်နော်။
နားလည်ပေးလို့ရအောင် ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်လေးတော့ ပေးခဲ့ပါ။
ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကို ပြောပြခွင့်မရှိတော့တဲ့ ဘ၀မှာ (အနေအထားမှာ)
မင်းဓါတ်ပုံလေးကို ကြည့်၊ အနမ်းလေးပေးပြီးတော့
ဒီကဗျာကို သူငယ်ချင်းတယောက်က ကျနော့်ဆီကို ပို့ထားတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပါ။ ကျနော်က ဒီဘလော့ဂ်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်သူငယ်ချင်းရဲ့ ကလောင်ကို အလွတ်မရ၊ မသိတာကြောင့် အမည်မသိလို့ လို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
11:51 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ထင်ရာ စိုင်း၊ မြင်ရာ ပိုင်းနေတော့
ချို၊ လက်၊ ခြေတွေနဲ့
ဖျက်ခနဲ --- ဖျက်ခနဲ
ဟို ပြေး၊ ဒီ ရောက်
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ မေလ
11:44 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ဘ၀ရဲ့ခရီးအဆုံးက ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်
လောကဓံမုန်တိုင်းရဲ့ ရေဆန် လေဆန်ထဲ
မရဲတရဲနဲ့ လှော်ခတ်ဆန်တက် လာလိုက်တာ --- ။
ဇာတိလှေကို မျက်ရည်မြစ်ထဲ ကြိုးဖြည်လွှတ်ချ
ပလူတွေ ဗျိုင်းတွေ ပျံသလို
ဦးတည်ရာမဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ ပျံသန်းနေပုံများ
ရိုးသားတာ အပြစ်ကင်းစင်တာက လွဲလို့
အလင်းကို ရှာ၏၊ အလင်းကား မတွေ့
ဘ၀ကို ကြက်ပူတိုက်သလို တိုက်ရင်း
ရောင်ကိုင်းလာတဲ့ နိစ္စဒူဝ ညတွေထဲ
“We need justice.
We want to go home.” ဆိုတဲ့ စကား
လျှပ်ရောင်တွေ ပြိုးပြက်တဲ့ ဒီညမှာ
ဒုက္ခတွေသာ သည်းမိုးသည်းရွာ သွန်းချနေတော့တယ်။ ။
2007 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (20)ရက်။
ဒီကဗျာကတော့ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ဒုက္ခသည်များ၏ ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်များအကြောင်းကို ကျနော် ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အသက်နဲ့ ရေးတယ် ---
သွေးနဲ့ ခြယ်တယ် ---
တကိုယ်တည်း အထီးကျန်စံ သူ ---
နှလုံးသား နံရံမှာ --- ။ ။
2007 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (9)ရက်။
ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ခွဲခွာရသူ ---
လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ် အထီးကျန်နေသူ ---
(62)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကိန့်တောင် မလှီးနိုင်ရှာ။
အကျဉ်းစံအိမ်၊ သံဆူးကြိုးတွေ ကြားမှ
လွတ်မြောက်ကာ မွေးနေ့ကိန့် လှီးနိုင်ပါစေသား ---
ဆုတောင်းမေတ္တာပို့နေပါတယ် မေမေ။ ။
(13. 06. 2007)
မေမေစု မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ ကဗျာပါ။
အမေစု လွတ်မြောက်ရေး ---
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး ပဲ။
အမေစုနဲ့ တွေ့၊ ဆုံ၊ ဆွေး၊ နွေးရေး
အမေစုကို ပြန်၊ လွတ်၊ တွေ့၊ ဆုံရေးကိုပဲ
2007 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (4)ရက်။
11:11 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကဗျာတွေကို ကျနော် ဆက်လက်တင်ပေးပါဦးမယ်။ ကျနော် အမေစုအတွက် ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာတွေပါ။ ကဗျာကောင်းတွေ တော့ မဟုတ်ပေမယ့်။ ကျနော့်ရင်ထဲက စကားတွေကိုတော့ ရေးချထားတဲ့ စကားလုံတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ကဗျာလို့ပဲ သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
11:05 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ဒေါသူပုန်ထ၊ မုန်ယိုအောင် ခြိမ်းပြီး
မကြာ --- အငွေ့အဖြစ် ပျံ့လွှင့်လို့
ကျဲပက်သွန်းကာ မိုးသည်းသည်း ရွာချပါ့မယ်။
ဇူလိုင် အလွမ်းတေးတွေ ရှာချနေတယ်။ ။
9. 07. 2007 ခုနှစ်
ကျနော့် ကဗျာများကို ဆက်လက်တင်ပေးပါဦးမယ်။ ကျနော် ကဗျာတွေကို ရေးတာ ၀ါသနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကဗျာကိုတော့ ကျနော် ကောင်းကောင်းမရေးနိုင်သေးပါဘူး။ ကဗျာတွေကို ကြိုးစားပြီး ရေးတုန်း၊ ဖတ်တုန်းပါပဲ။ အားနည်းတာများ တွေ့ရင် ပြောဆို ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော် လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
10:36 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
အရုဏ်ကျင်း စ ကတည်းက
အနာဂတ် ပန်းတိုင်ကို မျှော်ကြည့်
မသိရှာ၊ မမြင်ရှာတဲ့ ခရီးလား
ဟိုး --- မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းတိုင်
ပြောင်းရွှေ့ လွင့်မျော သွားနေလိုက်တာ။
နုံးမြေထုတောင် ဖြစ် ဖြစ် လာပြီ။
ထပ် ထပ် လာလိုက်တာ
‘ဆယ့် ရှစ် နှစ်’ ဆိုတဲ့ ခရီးရှည်ကြီး
မခေါ်ပဲ ရောက် ရောက် လာ
မဖိတ်ပဲ ပေါက် ပေါက် လာ
လျှောက်မြဲ လျှောက်ဆဲ ငါ။
(31. 07. 2006) 5း04 နာရီ
ဒီကဗျာကတော့ ကျနော် ဂျာနယ်တခုမှာ ထည့်ပြီးသွားပါပြီ။ အခု ကျနော် ဒီမှာ ပြန်တင်ထားပါတယ်။
ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့၌ မြန်မာများ ချီတက်ဆန္ဒ...